Hiriirri Beta Israa'eloonni Israa'el keessatti geggessan gara hookkaraatti geeddarame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Hiriirri Beta Israa’eloonni Israa’el keessatti geggessan gara hookkaraatti geeddarame
Hiriirri Beta Israa’eloonni Israa’el keessatti geggessan gara hookkaraatti geeddarame
Beta Israa'eloonni loogii sanyiif saaxilamneerra jedhu
Ayhuudonni Itophiyaa (Beta Israa’el ykn Falaashaa) dhibba heddutti laakkawaman magalaa Iyyaarusaleemitti hiriira nagaa guddaa geggeessan. Sababni hiriirichaa loogii sanyii, gara jabeenna poolisiifi gadi qabiinsa isaan irratti raawwatu mormuudha. Hiriirri kan geggeeffame fundura waajjira Muummicha Ministera Biyyatiititti.
Beta Israa’eloonni naannoo Israa’el hundarra dhufan hiriiricha irratti hirmaataniiru. Namoonni hiriira kana irratti argaman rukuttaafi loogii poolisiin biyyattii isaan irratti yeroodhaa yerotti raawwatu mootummichi akka dhaabu gaafataniiru. Aarii Beta Israa’el akka haarawaatti kan danfise as kaluu kana miseensi woraana biyyattii adiin tokko isa Beta Israa’el irratti rukuttaa hamaa yoo qaqqabsiisu viidiyoon mul’achuu isaati. Beta Israa’eloonni loogii sanyii saahuu isaan mudatuun alatti gama diinagdeetiinis haala hamaa keessa jiraatu.
Hiriira kana irratti hookkara ka’een namoota heddu irra miidhaan gaye. Akka gabaasni adda addaa agarsiisutti namoonni 15 madoo ta’aniiru.
Ummanni Beta Israa’el sanyii Ayhuudaa qaban jedhaman gara Itoophiyaatti akkamitti dhufan kan jedhuuf yaada gurguddaa lamatu jira: hariiroo mooticha Salamoniifi mootitii Saabaa jidduu ture irraa uumaman isa jedhuufi isa baqaan gara Itoophiyaatti dhufan jedhu.
Yeroo kanatti Beta Israa’el kuma 120 ol ta’antu Israa’el keessa jiraatu jedhamee tilmaamama. Irra jireessi Beta Israa’el kanniinii Itoophiyaa irraa gara Israa’eliti kan deebifaman bara 1977 – 1979 jidutti ture. Mootummaa Israa’el ture kan garasitti isaan fe’e; mootummaan Itoophiyaa balaa irra isaan buusaara jechuudhaan.
Beta Israa’elootaaf Israa’el keessatti jireenyi salphaa hintaane. Rakkoo aadaa, afaanii, qilleensaafi diinagdee jabatu isaan mudate. Akka Ayhuudota isaan biyyoota Awurooppaafi Ruusiyaa irraa Israa’elitti godaananii akka salphatti ufjijjiranii ummata isaan dura Israa’eli quphatetti makamanii jiraachuun isaniif hinaanjine. Hedduun Beta Israa’elootaa ammas afaan Amaaraa dubbatu, aadaas isuma qabatanii deeman jala tiratu. Hunda caalatti kan rakkoof isaan saaxilaaru gurraacha ta’uu isaaniiti.
hiriira beta israa'elootaa
Previous articleHaawwotiin hiyyummaafi qilleensa faalameef saaxilaman ijoollee IQ gad’aanaa qaban dayan, jedha qorannoon
Next articleHadhaan hiyyummaa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufe, jedha UNDPn
Ayhuudonni Itoophiyaa Tel Aviiv keessatti hiriira guddaa geggeessan - Awaash|Madda Odeeffannoo May 3, 2015 At 10:55 pm
[…] Hiriirri Beta Israa’eloonni Israa’el keessatti geggessan gara hookkaraatti geeddarame […]